ဆွစ်ဘဏ်လျှို့ဝှက် 1934 များ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်လုပ်ရပ်တတိယပါတီများမှတစ်ရာဇဝတ်မှုမှအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ရလဒ်အနေနဲ့သိသိသာသာမြို့တော်ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ဘဏ္ဍာဘဏ်များသို့ယင်း၏လမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရှုခင်းယနေ့နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဆွစ်ဇာလန်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးအများစုခိုင်မာတဲ့ဘဏ်များ၏အချို့အရာ၌ဝါကြွား။ သငျသညျသေချာပေါက်အစိုးရဆီက "ပိုက်ဆံဖုံးကွယ်" လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်က၎င်း၏လာမယ့်မုန့်ညက်ရှာကြံဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်္သေ့တစ်ဗူးကိုကြိုက်ကြောင်းမျက်စိလမ်းပေါ်မှာချဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီမှသင်၏ရန်ပုံငွေများကာကှယျနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ထဲကအများဆုံးရချင်တယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်, ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူတစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတိုင်းပြည်ရှာဖွေတာဟာအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့လိုအပ်သည့်အခါသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်သေချာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကဘာလဲ? သူတို့ထံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝေးဝေးရှောင်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကမ်းလွန် LLC ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုတက် setting များနှင့်, သင်၏ကာကွယ်ပေးသည်သောဤဖွဲ့စည်းပုံ၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဆွစ်ဘဏ်အကောင့်ရှိခြင်း privacy ကို ကြောင်းလုပ်ဖို့အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။
မှန်ပါသည်, Know-သင့်ရဲ့-client ကိုစည်းမျဉ်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲပါပြီ။ Plus အား, ဆှစျဘဏ်များသင်သည်သင်၏အခွန်ရှောင်ကိုကူညီမယ့်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော် privacy ကိုခိုင်ခံ့နေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ, ဆှစျစည်းမျဉ်းများနေတုန်းပဲသင်တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုများအတွက်အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှင်ကြည့်ရှုဆန္ဒရှိသူမြား၏ prying မျက်စိကိုကွယ်နေသည်။
အတော်များများကဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်မှကြွလာသောအခါအနည်းငယ်နိုင်ငံများဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပြိုင်နိုင်သည်ကိုသဘောတူလိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်ဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူကာကွယ်နှင့်အကောင့်အမည်ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကြောင့်သမိုင်းဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ထိုသို့တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘဏ်လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီများအတွက်ဆိုလိုခြင်းငှါအဘယျသို့စူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ဆွစ်ဇာလန်ကသူတို့ဖောက်သည်များ၏ဘဏ်ပုဂ္ဂလိကနှင့်လုံခြုံအကောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပိုအစီအမံယူကြောင်းနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုလက်တဆုပ်စာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှင်သန်နေသော ဤအရာရှစ်ကိုးကား ဘဏ်လျှို့ဝှက်ဥပဒေများနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်း ဆွစ်ဇာလန်, လီချင်စတိန်း, ဒိန်းမတ်, သြစတြီးယား, စင်ကာပူ, ဟောင်ကောင်, ပနားမားနှင့်ဥရုဂွေးအပါအဝင်အဖြစ်။ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် client ကိုလျှို့ဝှက်အဆင့်အသီးသီးသိရသည်။ သင့်လျော်သောဥပဒေရေးရာ tools များနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy ရှိသည်။
သို့ကြည့်မျှော်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကဤပုဂ္ဂလိက လျှို့ဝှက်ချက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြောင်း, ကတဦးတည်းအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကဆဲမဆိုအကောင့်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို "သင်၏ဖောက်သည်ကိုသိ" ဖို့အဲဒီမှာသွားကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရာမျှမကိစ္စ, ဘဏ်ဆဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အစအဦးမှာ၎င်းတို့၏ clients များအပေါ်ဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအဆင့်မှာဤအချက်အလက်ရယူခြင်းမည်သည့်တရားမဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အနည်းဆုံးအဲဒီဘဏ်တွေနိုင်ငံသားနှင့်လက်ရှိနေထိုင်ရာအထောက်အထားမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘဏ်အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းခံပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားတစ် IRS ကို W-9 ပုံစံလက်မှတ်ထိုးပါဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပါဘဏ်သည်သင်၏အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (TIN) ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အကောင့်တည်ရှိသော IRS ကိုအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ဥပဒေများနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောနိုင်ငံများတွင်ရှိပါတယ် အကယ်. ဆွစ်ဇာလန်ဤဆောင်းပါးကိုအာရုံစိုက်သည်တဦးတည်းသည်အဘယ်ကြောင့်, သင်တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များကျော်ကြားများမှာ, အဘယ်မှာသူတို့၏ဂုဏ်သတင်းကနေလာခဲ့တာလဲ အဆိုပါရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုမှကြွလာသောအခါ, ကျွမ်းကျင်သူများနေဆဲနီးပါးအမြဲညာဘက်စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးဆီသို့ဆွစ်ဇာလန်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Euroblawg လူတွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုရှေးခယျြသောအကြောင်းရင်းအများအပြားကိုးကားထားသည်။ ဤအရာတစျခုမှာဆွစ်ဇာလန်၏စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နှစ်ဆယ်ရာစု၏အဓိကဥရောပပဋိပက္ခများကိုတစ်လျှောက်လုံးကြားနေကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကြားနေရေးကြောင့်သိမ်းယူခြင်းများနှင့်အရှုံးဆန့်ကျင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံရန်စံပြနေရာအရပ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
အနိမ့်အခွန်အဖြစ်ကောင်းစွာကြီးမားတဲ့သရေကျဖြစ်ကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူနေသမျှကာလပတ်လုံးဝင်ငွေဆွစ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာထဲကနေမလာဘဲအဖြစ်, ဝင်ငွေပေါ်ဆွစ်ဇာလန်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့မလိုပါ။ အကောင့်ရေတွက်လည်း, ဒီကမ်းလွန်ဘဏ်နိုင်ငံတွင်ခိုင်မာတဲ့အယူခံကျင်းပခဲ့တယ်။ ရေတွက်အကောင့်အစားအမည်မိမိတို့အကောင့်နံပါတ်တာဝန်ပေးဖို့အားဖြင့်ကိုင်ဆောင်သူရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ အဆိုပါဘဏ်အများပြည်သူ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ဘဏ်များ၏န်ထမ်းအများစုဤအကောင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါရေတွက်အကောင့်မရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်။ privacy ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးကမ်းလွန် LLC ၏နာမ၌ထို့ကြောင့်ခေတ်သစ်ကာလ၌, လူတွေဖွင့်လှစ်ဆွစ်ဇာလန်အကောင့်အသစ်များ၏။
အမှန်စင်စစ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းလောကမှာရှိတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကျော်ကြားစေတော်မူပြီသောအကြီးမားဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ; သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏အမည်ဝှက်။ ဒီသီး, ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ၏မျက်နှာကိုအတွက်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံစေရန်ရှုပ်ထွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေးအယူများစွာသောလူခွင့်ပြုထားပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရေးအရသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအရမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးရုံအခါ။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်၏ကြွယ်ဝသောသမိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။
ဆွစ်ဘဏ်လျှို့ဝှက်အဆိုအရ 300 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင် ဘယ်လို Stuff အလုပ်လုပ်။ ပြင်သစ်ရေလရှင်ဘုရင်တို့ပိုကောင်းတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်း options များလိုအပ်တဲ့အခါဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတင်းကျပ်သောလျှို့ဝှက်လိုအပ်သိသိသာသာဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုကျင်းပများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏ချေးငွေပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်, ထိုကာလ၏ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်ကမ်းလွန်ရေနံဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. လျှို့ဝှက်၏ codes တွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမူပိုင်နဲ့စတင်ပေမယ့်, ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကုဒ်ဘဏ္ဍာရေးခိုလှုံခွင့်ရှာကြံမည်သူမဆိုများအတွက်ဆိပ်အဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပယ်ကန်။
တချို့ကဘဏ္ဍာရေးဥပဒေပြဌာန်းဝေးအဖြစ်ကောင်းစွာဒီနောက်ကျောစတငျရ။ 1713 အတွက်ဂျီနီဗာ၏မဟာကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်မှတ်ပုံတင်ရှိသည်ဖို့အားလုံးဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုအပ်ကြောင်းစည်းမျဉ်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကဘဏ်များ၏အပြင်ဘက်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းမှသူတို့ကိုတားမြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အဘို့ဤလိုအပ်ချက်မြို့ကောင်စီကအပေါ်သို့သဘောတူညီခဲ့ခဲ့လျှင်ဒီလိုအပ်ချက်ဖို့ချွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအချိန်တွင်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိသူဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအဘို့အဘယ်သူမျှမပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်ရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသာအရပ်ဘက်ဥပဒဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။ ဒါက 1934 များ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူ, သို့သော်, ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ဆွစ်ဘဏ် ကြိုတင်နှစ်ဆယ်ရာစုမှဥပဒေပြုအရပ်ဘက်ပညတ်တရား၏ထုတ်ကုန်နျြရစျ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 1934 ၏ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေအမျိုးသားဥပဒေအဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ထားတော်မူ၏။ ယင်းလုပ်ရပ်ရဲ့ဖန်တီးမှုနောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းကွန်ကရစ်မဟုတ်ပါက The Guardian သတင်းစာကရှင်းပြသည်။ တချို့ကနာဇီရဲ့, သူတို့ပြည်နယ်၏ရန်သူများကိုခဲ့ကြသည်ထင်သူတို့၏အမျိုးအအကောင့်အသစ်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စတင်သူများထံမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့က attribute ။ အခြားသူများလုပ်ရပ်ရဲ့ဖန်တီးမှုပြင်သစ်အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မီဒီယာလောင်စာအရှုပ်တော်ပုံနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဘုရားကျောင်းခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်အများအပြားကြီးမားသောကိန်းဂဏန်း၏ undeclared အကောင့်ထိတွေ့။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စအကြောင်းပြချက်, 1934 ၏ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေကဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များဘဏ်ပြင်ပမည်သူမဆို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထုတ်ဖော်ရန်များအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပင်ဘဏ်အတွင်း, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသာလက်တဆုပ်စာ client ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာသိတယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်နံပါတ်အကောင့်များအတွက်အမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကဥပဒေများပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီးအချို့သောအရာတို့ကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်။ သို့သော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များကလျှို့ဝှက်တဲ့ချိုးဖောက်နေဆဲထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အပြစ်ပေးသည်။
ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များဒီတော့ယုံကြည်စိတ်ချကြသည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကသူတို့ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများမွမ်းမံကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဥပဒေပြုမူဘောင်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများအဖြစ်ကောင်းစွာသည်အနည်းဆုံးပါလီမန်အားဖြင့်၎င်း, တခါတရံတွင်လူဦးရေအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပြီ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရုံးကရှင်းပြသည်။ 1984 မှာတော့ဆွစ်ဇာလန်လူဦးရေအပေါ်မဲပေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်နှိမ်နင်းရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်တဲ့အတိုင်းအတာငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ 1998 ခုနှစ်တွင်ပါလီမန်ကဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်၏ဖျက်သိမ်းရေးငြင်းပယ်ဖို့မဲပေးကြသည်။ 2000 အတွက်ဆွစ်ဇာလန်ဒိုင်အသင်း (SBA) ကတစ်ဦးကစစ်တမ်းလူများ 77% လက်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုဥပဒေများကိုထောက်ခံနှင့်လူမျိုး၏ 72% ဥရောပသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလျှင်ပင်သူတို့၏ဖျက်သိမ်းဆန့်ကျင်မည်ဟုမေးခွန်းထုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဆွစ်ဥပဒေပြဌာန်းသို့သော်ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ဦးလွယ်ကူသောထွက်ပေးရ created မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဆွစ်ဇာလန်လျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းများငွေကြေးခဝါချမှု, အတွင်းကုန်သွယ်ရေး, စတော့ရှယ်ယာခြယ်လှယ်, အခွန်လိမ်လည်မှုနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ရုပ်သိမ်းနေကြသည်။ 1977 ၏ဇူလိုင်လများတွင်မှုလုံ့လဝီရိယ၏လေ့ကျင့်ခန်း၏ပထမ version ကိုပု SBA ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် "သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကိုသိ" အခြေခံမူသဘောတူညီချက်ခိုင်မာအောင်နှင့်တက်ကြွစွာအခွန်ရှောင်မှုကိုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမြို့တော်လေယာဉ်အကူအညီပေးနေတာကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဆွစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေအသစ်ဆောင်းပါးများကို 1990 ၏သြဂုတ်လအတွင်းငွေကြေးခဝါချမှုအပေါ်ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအစသင့်လျော်သောကြောင့်လုံ့လဝီရိယကိုလေ့ကျင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဘဏ်များအဘို့အပြစ်ဒဏ်များလည်းပါဝင်သည်။ ဆွစ်လွှတ်တော်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်ဆောင်းပါးများထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည်ဆွစ်ဇာလန်အပြင်ဘက်အများပြည်သူအရာရှိတွေရဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား 2000 ၏မေလအတွက်ဆွစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေမှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။
ဇန်နဝါရီလ 1, 2017 တွင်, ဆွစ်ဇာလန်သတင်းအချက်အလက် (AEOI) စနစ်၏အလိုအလျှောက်လဲလှယ်ချမှတ်နေဖြင့်အခြားနိုင်ငံများတဲ့အိမ်ရှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, RT ကရှင်းပြသည်။ ဒီစံနှုန်းချမှတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အခြားနိုင်ငံများမှဘဏ္ဍာရေး၏ဖက်ဒရယ်ဦးစီးဌာနသည်နှင့်အညီ, အာဂျင်တီးနား, မက္ကစီကို, ဘရာဇီး, ဥရုဂွေး, အိန္ဒိယနှင့်တောင်အာဖရိကတို့ပါဝင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန် 38 နိုင်ငံများ၏စုစုပေါင်းနှင့်အတူအလိုအလျောက်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဖို့သဘောတူထားပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူ Pact အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။
AEOI အခွန်ရှောင်မှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (OECD ၏) ကစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစံလက်အောက်တွင်အားလုံးဘဏ်များကိုအလိုအလျောက်နိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများအပေါ်ဒေတာနှင့်အတူအမျိုးသားရေးအခွန်အာဏာပိုင်များထံ client ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘဏ်, အလှည့်၌, client ကိုရဲ့အိမျနိုင်ငံတွင်သတင်းအချက်အလက်အခွန်အာဏာပိုင်များသိရှိစေရန်ပါလိမ့်မယ်။ Institution များတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဤအချက်အလက်ဝေမျှနှင့် AEOI နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်လည်း၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအားဖြင့်ကျင်းပသည့်နိုင်ငံခြားအကောင့်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဤသည်စံဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ undeclared ပိုက်ဆံပုန်းအောင်းရာမှချမ်းသာကြွယ်ဝသောနိုင်ငံခြားသားများကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အခွန်ဥပဒကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနောက်တော်သို့လိုက်ခံကြောင်းသေချာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်နိုင်ငံ၏အခွန်ဥပဒေများတွင်အောက်ပါဖြစ်ကြောင်းအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့သည်သောသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး "ဒီယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစင်တာသမာဓိရှိခိုင်ခံ့စေဖို့အတွက်အထောက်အကူလိမ့်မည်။ "
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌သင်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံဖို့အဆင်သင့်ပါပဲသောအခါ, လိုအပ်ချက်များကိုသင်ရွေးချယ်ဘဏ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုထဲကအများဆုံးရသေချာစေရန်, ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်အထက်ပါဖုန်းနံပါတ်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတိုင်ပင်ခံတိုင်ပင်ဖို့သေချာပါစေ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်က navigate နှင့်သင့်တဦးချင်းလိုအပ်ချက် fit ဖို့အကောင်းဆုံးအကောင့်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်ကူညီနိုင်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ 400 ဘဏ်များကျော်ရှိပါတယ်, CNBC ကနေရှေးခယျြဖို့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပေးခြင်း, ကပြောပါတယ်။ တစ်ဦးက ဆွစ်ဘဏ်အကောင့်နိမ့်ဆုံးသိုက် များသောအားဖြင့် $ 250,000 မှာသို့မဟုတ်အထက်ပျမ်းမျှနှင့်တကွ, တရာထောင်ပေါင်းများစွာသောအတွက်စတင်သည်။ အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ရမည်။ အများအပြားကဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအတိုင်း, သင်တို့၏တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးကယနေ့စကားပြောနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်တဲ့ဆည်းပူးနေအားသာချက်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်လျှင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျအထကျနံပါတ်များများထဲမှတောင်းဆိုသို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံစံကို အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။